Mayelana NATHI |
UShaoxing Huawo Auto Parts Co., Ltd.
Sasiyibhizinisi lobungcweti eligxile ekwenzeni, ukuklama nokuthuthukisa izesekeli zemoto. Ku-2004, UHuawo uqale ukukhiqizwa kwempahla ye-TPO / TPE, amacansi ezimoto, itrunk mat, okhaphethi kanye neCar Sound Deadening Mat, ngenxa yokuthi sineminyango yethu yokwenziwa kwempahla eluhlaza kanye nomkhiqizo.
Omata bezimoto i-TPE / TPR yikhwalithi ehamba phambili emakethe, i-Eco-friendly, i-Anti-slip, futhi inikela ngakho konke ukuvikelwa kwesimo sezulu, ivikela imoto yakho ekungcoleni, odakeni, usawoti, imvula neqhwa. Futhi ilingana ngokwezifiso ngo-100% nemoto yakho, yenza impilo ibe lula futhi ihlanzeke.
Ngokuthuthuka kweminyaka eminingana, besizakhele imikhiqizo yayo yenzuzo kanye nohlelo oluphelele lokuphathwa kwekhwalithi kanye nelabhorethri ejwayelekile. Manje sesihlinzeka amacansi emoto neCar Sound Deadening Mat kwaVolkswagen naseToyota.
Njengoba ibhizinisi lethu namakhasimende ethu esekhulile, sinesifiso sethu sokukhiqiza nokunikezela ngezesekeli zezimoto ezisezingeni eliphakeme emakethe.
Sinomshini kusuka kokuqukethwe kuya kumkhiqizo wokugcina. Sinikeza insizakalo yobuchwepheshe nesikhathi esihle sokulethwa kuwo wonke amakhasimende.
Sizoba nawe ukusungula ubudlelwane besikhathi eside bobungani bokubambisana.